Jesu Anodana Vadzidzi Kuti Vave ‘Vabati Vevanhu’ | Upenyu hwaJesu
MATEU 4:13-22 MAKO 1:16-20 RUKA 5:1-11
JESU ANODANA VADZIDZI VAKE KUTI VACHIRAMBA VACHIMUTEVERA
VABATI VEHOVE VANOVA VABATI VEVANHU
Pashure pekunge Jesu atiza vanhu vekuNazareta vaiedza kumuuraya, anoenda kuguta reKapenaume, pedyo neGungwa reGarireya, iro rinonziwo “gungwa reGenesareti.” (Ruka 5:1) Izvi zvinozadzisa uprofita huri mubhuku raIsaya hwokuti vanhu vaigara pedyo neGungwa reGarireya vaizoona chiedza chikuru.—Isaya 9:1, 2.
Ari muno muGarireya, Jesu anoenderera mberi achizivisa kuti “umambo hwokumatenga hwaswedera pedyo.” (Mateu 4:17) Jesu anosangana nevamwe vadzidzi vake vana. Vakanga vambofamba naye asi pavakadzoka naJesu vachibva kuJudhiya, vakadzokera pabasa ravo rekubata hove. (Johani 1:35-42) Asi iye zvino vava kufanira kuramba vaina Jesu kuti vadzidziswe kuti vanozosara vachiita sei ushumiri iye aenda.
Achifamba nemumhenderekedzo yegungwa, Jesu anoona Simoni Petro, nemunun’una wake Andreya nevamwe vavo vachigeza mambure avo. Jesu anosvika pavari opinda muigwa raPetro omukumbira kuti akwasve zvishoma achipinda mugungwa. Jesu anobva agara pasi otanga kudzidzisa vanhu vakawanda vaungana mumhenderekedzo yegungwa kuti vanzwe chokwadi nezveUmambo.
Jesu anozoti kuna Petro: “Enda pakadzika, mudzikise mambure enyu kuti mubate.” Petro anopindura achiti: “Murayiridzi, usiku hwose tashanda zvakaoma tikasabata chinhu, asi nokuti marayira ndichadzikisa mambure.”—Ruka 5:4, 5.
Vanodzikisa mambure avo vobata hove dzakawanda zvokuti anotanga kubvaruka. Varume vacho vanosimudza maoko vachidaidza vamwe vavo vari mune rimwe igwa riri pedyo kuti vakurumidze kuzovabatsira. Pasina nguva magwa ose ari maviri anozara nehove zvokuti anotanga kunyura. Achiona izvi Petro anopfugamira Jesu achiti: “Ibvai kwandiri Ishe, nokuti ndiri munhu anotadza.” Jesu anomupindura achiti: “Rega kutya. Kubvira zvino uchange uchibata vanhu vari vapenyu.”—Ruka 5:8, 10.
Jesu anoudza Petro naAndreya kuti: “Nditeverei, uye ndichakuitai vabati vevanhu.” (Mateu 4:19) Anodanawo vamwe varedzi vaviri, Jakobho naJohani, vanakomana vaZebhedhi. Vanobva vangomuteverawo. Saka vese vari vana vanobva vasiya bhizimisi ravo rekubata hove vova vadzidzi vokutanga vacharamba vachifamba naJesu.
Jesu anodana vanhu vaiita basa rei kuti vave vadzidzi vake vacharamba vachimutevera, uye ndivanaani?
Chishamiso chipi chinovhundutsa Petro?
Vadzidzi vana vachange vava kubata chii?